जनकपुर यातायात व्यवसायी संघको ‘सिण्डिकेट’मा स्थानीय प्रशासनकै सहयोग « News24 : Premium News Channel
जनकपुर यातायात व्यवसायी संघको ‘सिण्डिकेट’मा स्थानीय प्रशासनकै सहयोग
धनुषा । सरकारी व्यवस्थाअनुसार कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातका साधनले रोजेको गन्तब्य जान पाउँछन् । कसैले रोकतोक गर्न पाउँदैन । ‘सिण्डिकेट’ अन्त्यका लागि भन्दै गरिएको यो व्यवस्था जनकपुरमा भने यातायात व्यवसायीले नै कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन् । जसविरुद्ध स्थानीय प्रशासन पनि कडारुपमा उत्रिन सकेको छैन ।
संस्था दर्ता ऐनअनुसार स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएका यातायात सम्वद्ध समिति, संघ र संस्था खारेज गरेको सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, जनकपुरमा भने जनकपुर यातायात व्यवसायी संघको दबदबा घटेकै छैन । उसले कम्पनीमा दर्ता भएका बस जनकपुर प्रवेश गर्नै दिदैन । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– सिद्धार्थ गौतमबुद्ध यातायाता सेवा केन्द्र प्रालिले राजविराजबाट सञ्चालन गर्न लागेको बसलाई जनकपुरमा लगाइएको रोक ।
कम्पनीमा दर्ता भएका बस जनकपुर प्रवेशका लागि जनकपुर यातायात व्यवसायी संघले प्रतिगाडी ६ लाख रुपैयाँ मागेको सिद्धार्थ गौतमबुद्ध यातायाता सेवा केन्द्र प्रालिका सञ्चालक बताउँछन् । संघकै संरक्षणमा पुराना बस सञ्चालकले नयाँलाई धम्क्याउँदै आएका छन् ।
कम्पनीमा दर्ता भएका बसका सञ्चालकले जनकपुर यातायात व्यवसायी संघको दादागिरीबारे स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई अवगत नगराएका पनि होइनन् । तर, दुवै निकायले निरन्तर वेवास्ता गरेको नयाँ व्यवसायीको गुनासो छ । उता, स्थानीय प्रशासन जानकारी गराए जनकपुर यातायात व्यवसायी संघविरुद्ध ‘एक्सन’मा उत्रिने दावी गर्छ ।
व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दर्ता गराएको यो निवेदनले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दावी खण्डन गर्छ । कम्पनी सम्वद्ध व्यवसायीले लिखित गुनासो गर्दा पनि स्थानीय प्रशासनले पुरानै व्यवसायीको दबदबा कायम राख्न सहयोग पु¥याइरहेको स्पष्ट हुन्छ । उता, आफू नै सर्वेसर्वा झैं गरी जनकपुर बस व्यवसायी संघ समय तालिका खाली नरहेकाले जनकपुर—राजविराजमा कम्पनी सम्वद्ध बस चलाउन नदिएको कुर्तक गर्छ ।
सरकारको ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गर्ने घोषणामा स्थानीय प्रशासन कतिसम्म गैर–जिम्मेवार छन् भन्ने पुष्ट्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको यो हर्कतले गरेको छ । ‘सिण्डिकेट’का कारण साना यातायात व्यवसायी यसरी मारमा पर्दा सर्वसाधारण पनि हैरान छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालमा पानीको थोपा छैन, शौचालय छिर्नै सकिन्न (भिडियो)
उन्नाइस प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा
रौतहटमा कालोपत्रे गरेको सडक दुई सातामै उप्कियो, स्थानीय बने आक्रोशित
नुवाकोट जग्गा कब्जा प्रकरण– कसरी मुछिए साध्यबहादुर भण्डारी ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बाः दक्ष जनशक्तिको उत्पादन बढाउनु पर्छ
कान्ति बाल अस्पतालको कन्त-बिजोग !
access_time 11:08 pm
access_time 10:12 pm
नेपाली मार्सलआर्ट बुदोकैदो फुल कन्ट्याक्ट कराँतेलाई प्रहरी संघसंगठनमा भित्र्याउने महानिरीक्षक खनालको उद्घोष
access_time 10:11 pm
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३९२ औं एपिसोड हो ।
काठमाडौं । सरकारले १९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयको शुक्रबार
हरिशजङ्ग क्षेत्री काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संघसंगठन भित्र नेपाली मार्सलआर्ट बुदोकैदो फुल कन्ट्याक्ट कराते भित्रीने